कर्णाली नदीमा अबैधरुपमा ढुङ्गा उत्खनन् कार्य वढ्यो
जिम्मेवार निकायको भुमिका स्पष्ट नहुदा थप अन्यौलता
रोक्ने दायित्व कसको ?
लम्की / कैलालीका बिभिन्न स्थानिय खोला नदि बाट अबैध रुपमा ढुङ्गा, बालुवा गिट्टी उत्खनन हुन थालेको ब्यापक जनगुनासो आएपछि सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानिय खोलानाला बाट नदिजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरीत उत्खनन् हुन थालेको ब्यापक जनगुनासो आएपछि यस क्षेत्रका स्थानियतहका प्रमुख र बनका कर्मचारीले आईतवार संयुक्त अनुगमन गरेका हुन ।
मापदण्ड विपरित स्थानिय खोला नालाबाट अबैध रुपमा ढुङ्गा, बालुवा गिट्टी उत्खनन् हुनथाले पछि स्थाािनयले चिनता गरे संगै स्थानियतहका प्रमुख र वनका कर्मचारीले संयुक्तरुपमा अनुगमन गरेका छन । अनुगमनको क्रममा जिल्लाको कर्णालीनदी, गोराङ्गे, बल्चौर, धोबेनी रोरा लगायतका खोलाबाट मापदण्ड विपरीत उत्खनन भैरहेको पाईएपछि यसलाई तत्काल रोक्नको लागि पहल आवश्यक भएको ठहर गरेका छन । स्थानिय तहले आफैले आई.ए.ई. गरी ठेक्कापट्टा दिएकाले यस्तो अबैधरुपमा उत्खनन् गर्ने ठेक्केदारको ठेककारोक्न अग्रसर हुनु पर्ने बन डिभिजन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका डिभिजन बन अधिकृत दिपक ज्ञावलीले बताउनु भयो । तर स्थानियि तहले कागजमै लेखेर नदिमा स्काभेटर प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएपछी कसले रोक्ने भन्ने थप अन्यौलता वढेको छ ।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा सतहको आकार बृद्धि भए नभएको अध्यन गरी आई.ए.ई. रिपोर्ट बनाउनु पर्ने ठाउमा राज्यको सम्पतीको दोहन हुनेगरी भएका ठेक्काले नदिको तटिय क्षेत्रमा रहेका जानकी गाउपालीका र टीकापुर नगरपालिकालाई समेत असर पर्ने भएकाले अबैध उत्खखन् रोक्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । स्थानियतहले ठेक्कका दिदा भएको सम्झौता विपरीत ठेकेदारले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् मात्र गरेनन्, प्रदेश भन्दा बाहिर समेत अबैध रुपले निकासि गरी रहेको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाइको आरोप छ ।
अबैधरुपमा उत्खनन् गर्नेलाई तत्काल कारबाहिका लागि सरोकारवाला संग साथ र सहयोग दिन आग्रह समेत गरेको बताउदै नगर प्रमुख बजगाईले पहिलो पटक एकबार ठेक्केदार संग छलफल गरीने फेरी गल्ती दोहोरीय जानकी गाउपालिका संग समन्वय गरी कारबाहिका लागि अगाढी बढने समेत नगर प्रमुख महादेब बजगाईले चेतावनी दिनु भयो ।
जानकी गाउ“पालिका अध्यक्ष प्रदिप चौधरीले भने संघिय सरकाले स्पष्ट निति ल्याउन नसकेका कारण स्थानिय सरकारलाई समस्या परेको गुनासो गर्नु भएको छ । नदिजन्य पदार्थको सहि ब्यावस्थापन हुन नसके ठेक्कानै रोक्का गरी नया विधि अपनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
हुनत स्थानिय तह र ठेककेदार विच ठेका सम्झौता हुदा समेत तोकीएका पोईन्ट बाट मात्र उत्खखन गर्न पाउने र अन्य टेक्याटर र ब्यावसायि जादा ठेकेदार कम्पनी संग समन्वय गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर नियम विपरी टेक्टरले उत्खनन् गरेको जानकी गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मातृका भट्राईको भनाई छ ।
संघिय सरकार र स्थानिय तहविच तथा अन्य सरोकारवाला निकाय विच समन्वय हुन नसक्दा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्मा जटीलता थपिदै गएको छ । यसको बेलैमा उचित ब्यवसथापन हुन नसके दजनौ बस्तीहरु बाढी र डुवानामा पर्ने निश्चीत छ, भने राष्ट्रिय गौरबको आयोजना रानी, जमरा, कुलरीया कुलोमा समेत असरपर्ने देखिन्छ । एक अर्कोलाई दोषलगाई आफु पन्छिन खोज्नु भन्दा यसको उचित ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउ छन ।